Xiddiga Kooxda Real Madrid ee Eden Hazard oo wali miisaankiisu yahay mid culus & Los Blancos oo doonaysa inuu 4kg iska rido – Gool FM
(Madrid) 10 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inaysan ku faraxsanayn in weli miisaankiisu yahay mid culus xiddiga ay lacagaha badan kula soo saxiixdeen ee Eden Hazard.
Tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay garoonka Bernabeu kooxda Chelsea suuqii xagaaga, Hazard ayaa ku guuldarreystay inuu bandhig cajiib ah sameeyo, isagoo dhaliyey kaliya hal gool oo yimid lix kulan oo uu u ciyaaray Los Blancos tartammada oo dhan.
U wareegista xiddiga reer Belguim ee uu ka tagay horyaalka Premier League isla markaana uu ku aaday La Liga waxaa qayb ahaan caqabad ku ahaa dhaawac soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay ee isu diyaarinta xilli ciyaareedka.
Si kastaba ha noqotee, wararka laga helayo gudaha Spain ayaa sheegaya in xubno ka tirsan waaxda macallimiinta Real ay dareensan yihiin in 28-sano jirkaan uu weli u baahan yahay inuu miisaankiisa dhimo isbuucyada soo socda.
Los Blancos ayaa la sheegayaa inay doonayso in kubbad-sameeyahan uu iska rido ku dhawaad afar kiilo (4kg) si uu u horumariyo heerka uu ka ciyaaro garoonka Bernabeu.
Kooxda Manchester United oo dib ugu laabanaysa doonista daafaca Benfica ee Ruben Dias